Semalt ई वाणिज्य एसईओ को मुख्य पक्ष बताउँछ
एक वेबसाइट निर्माण र ट्राफिक प्राप्त गर्न दुई फरक चीज हो। अनलाइन स्टोर सुरूवात गर्नु सजिलो काम हो तर यो गाह्रो हुन सक्छ जब तपाईं ईन्टरनेट मार्फत ग्राहकहरू प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। यो समस्या तीव्र हुन्छ किनकि प्रतिस्पर्धीहरूले बजारमा हाम्रो अवसरहरू सीमित गर्छन्। जब तपाइँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र एक वेबसाइट सेट अप गर्नुहुन्छ, तपाइँले गुगल जस्ता खोज इन्जिनहरू द्वारा मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक छ, त्यसैले तपाइँलाई खोज इन्जिन अनुकूलनको आवश्यक पर्दछ। यस प्रक्रियामा तपाइँको साइटका सुविधाहरू परिवर्तन गर्न समावेश गर्दछ खोजी कुञ्जी शव्दहरूमा शीर्ष स्थान प्राप्त गर्न खोज इञ्जिन एल्गोरिदमको आवश्यकता अनुसार।
जेसन एडलर, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धकले तपाइँको सामग्रीलाई आधिकारिक र वेबसाइट कसरी बनाउँदछ भन्ने बारे महत्वपूर्ण सल्लाह दिन्छ।
तपाईंको साइटको गति र प्रतिक्रिया सुधार गर्नुहोस्
तपाईको मेटा शीर्षक र वर्णनमा काम गर्नुहोस् अधिक आकर्षक र कार्यवाही गर्न
लामो, अधिक अनौंठो उत्पाद वर्णन र लामो पुच्छर कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्नुहोस्
अधिक ग्राहकहरू आकर्षित गर्न ग्राहक समीक्षाहरू थप्नुहोस्
ग्राहकले के खोजिरहेका छन् भनेर उल्लेख सामग्री पोस्ट गर्नुहोस्
SEO गर्दा, धेरै उपकरणहरू तपाईंको प्रयासहरूको लागि लाभदायक हुन सक्छ। यी उपकरणहरूले समावेश गर्दछ:
१. PicMonkey र Kraken। यी उपकरणहरूको संयोजनले तपाईंलाई वेब डिजाइन अनुकूलन सुविधाहरू दिन्छ। तिनिहरूले सम्पादन गर्न र इन्टरनेट पृष्ठमा चित्रहरूको आकार कम गर्न सक्दछ तपाईंको वेबसाइटको गति र प्रतिक्रिया बढाउँदै।
२. getFiveStars। यस उपकरणले उनीहरूलाई मद्दत गर्दछ जसले आफ्नो ग्राहकको प्रतिक्रियाको बारेमा चिन्ता गर्दछ। गेटफाइभस्टार्सले तपाईंको ग्राहकलाई आवश्यक जानकारीको साथ ईमेल पठाउनेछ। यसले इन्टरनेटमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिक्रिया अवरोध गर्दछ साथै तपाईंको क्रमबद्धलाई सुधार गर्दछ।
Aut.टोपाइलट। यो एक सस्तो उपकरण हो जुन तपाइँको मार्केटि campaigns अभियानहरूका केहि पक्षहरूलाई स्वचालित गर्न सक्दछ। यो अनुप्रयोग us०-दिनको निःशुल्क परीक्षणको साथ आउँदछ जुन पछि २ followedusd मासिक सदस्यता छ।
Y. योरोकेट। यस उपकरणले वेबसाइटको मेटा शीर्षक र विवरण मूल्या evalu्कन गर्न सक्छ। तपाईं यसलाई वेबपृष्ठमा वर्णन बाध्यकारी बनाउन र सामग्री मार्गनिर्देशन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ब्रायन डीन र ब्याकलिन्कोले यस उपकरणको विकास गर्‍यो। यो एक प्रीमियम सेवा हो, र प्रयोगकर्ताहरूले उच्च क्लिक हुँदै दरहरूमा उनीहरूको क्लिक प्राप्त गर्न भुक्तान गर्छन्।
Se. Semalt कुञ्जी सल्लाह। यो एक कीवर्ड खोज उपकरण हो जुन लामो पुच्छर कुञ्जी शव्दहरू प्रदान गर्न सक्दछ। यो तपाईंलाई सर्च सर्तहरू दिन ईन्टरनेटबाट किन्नको लागि प्रयोग गरीरहेको छ। यसले तपाइँलाई सूची बनाउन वा अनलाइन सामग्री सिर्जना गर्न कुञ्जी शब्दहरू दिन सक्दछ।
एक वेबसाइट निर्माण र आगन्तुकहरूको एक प्रवाह प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ। एसईओको साथ, चीजहरू अलिक सजिलो भए, र त्यहाँ केही आशा छ। सामग्री चयन र ब्याकलि through्क जस्ता SEO रणनीतिहरू मार्फत तपाईंको वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्न तपाईंको साइटलाई ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्दछ। ईकॉमर्स एसईओ उपकरण प्रयोग गरेर, तपाइँ एक सुसंगत अभ्यासको स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाइँको वेबसाइट शीर्ष खोजी स्थितिहरूमा रहनेछ र फलस्वरूप, नयाँ आगन्तुकहरू प्राप्त गर्नेछन्।